Vaayrasii koroonaa ittisuuf duursinee qophaa’uu fi qajeelfamoota mamii malee hojiirra oolchuu qabna -MM Dr Abiy – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Vaayrasii koroonaa ittisuuf duursinee qophaa’uu fi qajeelfamoota mamii malee hojiirra oolchuu qabna -MM Dr Abiy
On Mar 26, 2020 178
Finfinnee, Bitootessa 17,2012(FBC) – Vaayrasii koroonaa ittisuuf duursinee qophaa’uu fi qajeelfamoota mamii malee hojiirra oolchuu qabna jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Dooktar Abiy ergaa isaanitiin hawaasni idil addunyaa kooviid 19 maal geessisuu akka danda’u, mirkanaan dubbachuu hin dandeenye jedhaniiru.
Kanaaf haalicha dandamannee rakkinicha injifannoodhan keessa darbuuf duursanii qophaa’uu fi qajeelfamoota mamii malee raawwachuun barbaachisaadha jedhan.
Haalli hamaa inni dhumaa yoo gahellee qophoofnee turuun keenya gaaga’amasaa ni hir’isaan dhaaman.
Kanaafis kaleessa Koreen Deeggarsa Walittiqabduu Biyyoolessaa adeemsa walitti qabuu maallaqaa fi dhiheessiiwwan kan biroo barbaachisan qindeessu hundaa’uu ibsan.
Sadarkaa federaalaatti giddugaloonni itti adda baasanii hordofan, adda baasanii tursanii fi wal’aanan qophaa’aniiru.
Kan itti aanu galteewwan isaan barbaachisan akka guutamaniif gochuudha jedhan muummee ministiraa karaa fuula Feesbuukii isaanitiin.
Mootummoonni naannolees qophii walfakkaatu gochuu itti fufu; yeroo kanatti naasuu, sodaa fi dhiphachuu keessaa baanee galteewwan qabnu hunda walitti qabuudhan gara Koree Deggarsa Biyyoolessaatti fiduudhan gumaacha haa goonun waamicha dhiyeessaniiru.
Maallaqa buusuuf akka dandeenyuf lakkoofsonni herreegaa baankii fi sirni ergaa gabaabaa qophaa’aniiru.
Qonnaan bultoonni ciccimoonii fi oomishtoonni nyaataas dhiheessii nyaataa arjoomuu akka danda’an baankiin nyaataas qophaa’aa jira.
Hojiin shaqaxoota barbaachisan lammiilee keenya caalaatti saaxilamaniif qopheessuu akkuma jirutti ta’ee, giddugaleeyyiin itti adda baasanii hordofan, adda baasanii tursanii fi wal’aananiif meeshaalee barbaachisan guutuunis nurraa eegama jedhan.
Yeroo gidiraan numuudatu waloodhan akka itti duullu hojiidhan haa agarsiifnun waamicha dhiyeessaniiru.
Mana keenya waloo Itoophiyaa jennee waamnuf tokkoon tokkoon keenya gumaachuuf itti gaafatamummaa qabnas jedhaniiru muummee ministiraa.
Walirraa hiiqinsi qaamaa iddoowwan gabaa fi geejibaatti hojiirra ooolaa akka hin…
Ityoophiyaatti namoonni dabalataa 3 vaayrasii koroonaatin qabamuun mirkanaa’e
Raayyaan ittisaa maarch baandii fi heelikooftaraan vaayrasii koroonaarratti hojii…
Tajaajilli Iityoo Teelekoom Oromiyaa Lixaa, har’arraa eegalee tajaajilasaa…
Waajjirri Muummee Ministiraa dhimma COVID-19 ilaalchisuun…
Naannon Oromiyaa geejibni magaalaa keessaa fi geejiba…
Daandiiin Qilleensa Ityoophiyaa balallii idil addunyaa 80…
Ityoophiyaatti namoonni vaayrasii koroonaatin qabaman 23…
Walirraa hiiqinsi qaamaa iddoowwan gabaa fi geejibaatti…
Ityoophiyaatti namoonni dabalataa 3 vaayrasii koroonaatin…
Raayyaan ittisaa maarch baandii fi heelikooftaraan vaayrasii…
Oduu biyya keessaa1238